व्लग के हाे ? कसरि बनाउने ?
आजभोलि प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ । कम्प्युटर बजारमा आएसँगै डायरी लेख्नेहरुको संख्यामा कमि आयो । कारण कम्प्युटर थियो । डायरिमा लेख्ने कुरालाई कम्प्युटरमा लेखेर कम्प्युटरमै राख्न थालियो । विस्तारै ईन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा आफुले लेखेको कुरा ईन्टरनेटको सहयोगमा विभिन्न सामाजिक संजाल र वेवसाईटको प्रयोग गरेर सबैले पढ्न मिल्ने बनाउन थालियो । अहिले आफ्नो पर्सनल वेवसाईट/ब्लग बनाउनेहरुको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गईरहेको छ । नेता, कलाकार, साहित्यकार, संगितकार, गायक, उद्योगी…
Added by NABIN SHARMA on July 30, 2016 at 10:00pm — No Comments
Added by sabita Acharya on July 29, 2016 at 3:32pm — No Comments
बिस्तारै महिलामा पर्बितन हुदै
महिलाले चुलोचौको घरधन्दामैे सिमीत हुनपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको हाम्रो समाज अहिले बिस्तारै परिबर्तन हुदैछ । बिभीन्न संघ सस्थाले महिलाको हक अधिकारका बारेमा जानकारी गराएर सचेतना दिन थालेपछी बिस्तारै परिर्बतन हुन थालेको हो । अहिले यसको उदारण बनेकी छन् बैतडीको…
Added by indrasara khadka on July 14, 2016 at 11:31am — No Comments
Added by Rejina Rai on July 1, 2016 at 12:28pm — No Comments